Warkii.com-News and information about Somalia Cali Xaaji Warsame oo Dalka Kenya ugu ambabaxay arrimo siyaasadeed. - Warkii.com-News and information about Somalia
Cali Xaaji Warsame oo Dalka Kenya ugu ambabaxay arrimo siyaasadeed.
Musharaxa Dr. Cali Xaaji Warsame oo ka mid h Musharaxiint u taagan Xilka Madaxwaynaha Soomaliya ayaa Safar deg deg ah ugu ambabaxay magaalada Nairobi ee xarunta Dalka Kenya, waxaana socdalkiisu la xariiraa Olalaha Doorashada ee maalmihii lasoo dhafay uu ka waday Magaalada Muqdisho.
Dr.Cali Xaaji Warsame ayaa la soo sheehgayaa inuu dalka Kenya kulamo balaaran kula yeeshay Siyaasiyiin ka kala socota Beesha Caalamka, iyadoo sidoo kale uu halkaasi kulamo kula leeyahay Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Kenya.
Dhanka kale Musharaxaan ayaa u muuqda mid ku socda si dar dar ah, iyadoo uu kasbaday taageerayaal fara badan, wuxuuna sheegay inuu xoogga saari doono adkaynta Nabadgelyada Soomaaliya iyo Midnimadeeda.